HomeWararka CiyaarahaAntonio Conte oo difaacay Harry Kane xilli uu goolal la’aan yahay
Tababaraha kooxda Tottenham Hotspur Antonio Conte ayaa ku adkeystay inuu aad ugu faraxsanyahay qaab ciyaareedka Harry Kane , inkastoo kabtanka England uu abaar gool ka ka heysato Premier League.
28 jirkaan ayaa afar jeer shabaqa soo taabtay tartanka Europa League xilli ciyaareedkan laakiin waxa uu hal gool ka dhaliyay 12 kulan oo heer sarre ah xilli ciyaareedka 2021-22.
Kane ayaa qeyb ka ahaa kulankii Brentford ee bartamihii Isbuuca waxa uu calaamad u ahaa kulankiisii ​​shanaad ee horyaalka oo xiriir ah gool la’aan, laakiin Conte ayaa rajeynaya in xiddigan uu si dhaqso ah ku soo laaban doono.
“Ugu horreyn, waxaan hubaa in Harry uu ku faraxsan yahay haddii aan badino, mana uusan dhalin, sababtoo ah Tottenham ayaa ah fikirka ugu horreeya annaga iyo Harry,” Conte ayaa ku sheegay shir jaraa’id, sida laga soo xigtay Football.london .
Kane ayaa isku diyaarinaya kulanka axada ee Norwich City isagoo gool dhaliyay mid kasta oo ka mid ah seddexdii kulan ee ugu dambeysay ee uu la kulmay Canaries.